जाडो मौसममा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुनुको कारण यस्ता छन् – Hotpati Media
२४ आश्विन २०७७, शनिबार १६:४८ मा प्रकाशित (2 हप्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
काठमाडौँ- विस्तारै गर्मी मौसम जाडो तर्फ बदलिने क्रम जारी छ । जाडो मौसमको सुरुवातसँगै हामीमा एउटा प्रमुख समस्या आउछ, त्यो हो—शरिरको प्रतिरक्षा प्रणाली कसरी बलियो बनाउने । हाल कोरोना संक्रमणको बेलामा त झन प्रतिरक्षा प्रणाली शसक्त हुन झनै जरुरी छ ।
ऋतुहरुमा आउने परिवर्तनसँगै वातावरणमा समेत परिवर्तन आउछ जसले तापक्रम लगायतका विविध कुराहरुमा परिवर्तन आउछ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मानव शरीरमा समेत पर्दछ । मानव शरिरको तापक्रम स्थिर रहन खोज्दछ र वातावरण परिवर्तनसँगै समायोजन हुन कोशिस गर्दा शरिरमा भएका प्रतिरक्षा प्रणालीमा हलचल उत्पन्न हुन्छ ।
दक्षिण कोरियाको ख्यंगी विश्वविद्यालय अस्पतालका बरिष्ठ डाक्टर प्रा. चोई चियो वुङका अनुसार मानव शरिरले सकेसम्म आफ्नो भित्रि तापक्रमलाई परिवर्तन गर्न चाहादैन । त्यही कारणले शरिरले शरिर भित्र भएका प्रतिरक्षा प्रणालीहरुको सहयोगमा आफ्नो तापक्रम स्थिर राख्न खोज्दा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बन्दछ ।
तापक्रमका कारण शरिरको पाचन प्रकृयामा समेत प्रभाव गर्ने प्रा. डा. ली डुक छलले बताएका छन् । उनका अनुसार हरेक १ डिग्री सेल्सीयस तापक्रम बृद्धिसँगै ०.५८ प्रतिशत मृत्यु जोखिम बढ्ने उनले बताएका छन् । यो रिपोर्ट सोल राष्ट्रिय विश्वविद्यालय अस्पतालले गरेको अनुसन्धानबाट प्राप्त गरिएको उनले बताएका छन् ।
तापक्रममा उत्पन्न हुने हलचलको प्रभाव ६५ बर्ष भन्दा माथिका मानिसमा बढी पर्ने भएका कारण उनीहरुको मृत्युदर समेत बढी भएको उनले बताएका छन् । जाडो मौसममा स्वासप्रश्वासमा समस्या आउँदा उनीहरुको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भई मृत्युदर उच्च भएको अनुसन्धान रिपोर्टले बताएको छलले बताएका छन् ।